G20 Rome Summit: Kuvhara musangano wevatori venhau musi wa 31 Gumiguru 2021 wakaitirwa kuNuvola.
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » G20 Rome Summit: Kuvhara musangano wevatori venhau musi wa 31 Gumiguru 2021 wakaitirwa kuNuvola.
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Investments • Italy Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Trending Now
Iyo G20 muRome ichangopera nemusangano wevatori venhau. eTurboNews Mutori wenhau weItaly Mario Masciullo akapinda. Pakati pemadingindira makuru emabasa, kunze kwedenda uye vaccin, yaive dambudziko remamiriro ekunze, kudzoreredza hupfumi, uye mamiriro muAfghanistan.
Musangano wekupedzisira weG20 Rome Summit wevatori venhau musi wa 31 Gumiguru 2021 wakaitirwa paNuvola.
Mutungamiriri weItaly, Mario Draghi, akavhura G20, achitarisira kubatana kwechinangwa kurwisa denda.
Musangano uyu wakaitwa kekutanga muItaly.
Kuna Francesco Tufarelli, Mutungamiriri we "Europolitica" network, akati "zvakakosha kudzorera munhu pakati pezvematongerwo enyika nehupfumi."
Vakadaro PM Draghi: "Dai nyika ikafamba pamwe chete kuhwina mukurwisa denda."
Musangano wekupedzisira weG20 weRome Summit neMutungamiriri Mario Draghi
G20, chibvumirano pakati peUS neEU chekubvisa mabasa pasimbi nealuminium. Draghi: "Nhanho yekutanga yekuvhura kutengeserana kukuru."
G20, kune chibvumirano chekudzika pamusoro pemamiriro ekunze: sirin'i ye1.5 madhigirii ekudziya kwepasi asi kungotaura kusinganzwisisike kune zero emissions "pakati pezana remakore"
G20, Draghi anoti: “Takazadza mashoko acho nechinhu. Tichasvika zvishoma nezvishoma muna 2050 sezuva rekuburitsa zero."
“Pamusangano uyu, takaona kuti zviroto zvedu zvichiri zvipenyu asi iko zvino tinofanira kuona kuti tazvishandura kuti zvive chokwadi,” akadaro mutungamiriri wehurumende pamusangano wevatori venhau. "Pakupedzisira, pane vimbiso yekupa 100 bhiriyoni pagore kune nyika dzine urombo." Uye akabva azivisa kuti Italy ichapeta katatu kuzvipira kwayo kwemari kusvika 1.4 bhiriyoni pagore kwemakore mashanu anotevera ehomwe yegirinhi yemamiriro ekunze.
Mutungamiriri wehurumende vakabva vapinda mune zvakawanikwa zvakawanikwa, vachitsanangura kuti “takaita zviwanikwa zvakawanda; takachengeta zvisungo izvi, uye takaona kuti zviroto zvedu zvichiri zvipenyu uye zviri kufambira mberi. Tichatongwa nezvatinoita, kwete nezvatinotaura,” vachitsinhira mashoko evatungamiri vakawanda. Uye akabva avimbisa kuti: "Tinodada" nemhedzisiro yakawanikwa kuG20 asi "aya angori mavambo."
G20, Draghi: "100 bhiriyoni kubva kuG20 kune nyika dzine urombo pane mamiriro ekunze."
"G20 yakabudirira," akadaro Prime Minister, Mario Draghi, uyo afunga kuongorora musangano uchangopera muRome nezvemamiriro ekunze. Musangano uyo, anodaro, wakaunza zvikomborero zvakati kuti, kunyange kana “zvaisava nyore.” Pakati peizvi, PM inotaura nezve shanduko yemutero wepasirese "yatakaedza kuita kwemakore tisingabudiriri," muganho we1.5 C ° weavhareji yekudziya kwepasi "inovandudza Zvibvumirano zveParis," mukuwedzera kune "kuunza dzimwe nyika." kusava nechokwadi nezvezvinzvimbo zvakajairwa pa decarbonization," zvine chirevo chakajeka kuRussia uye, pamusoro pezvose, China.
Kubudirira kwekutanga kwakatsikiswa naDraghi ndeyekukwirisa kukwira kweavhareji tembiricha yepasirese, yakaiswa pa1.5 C °: "Maererano nemamiriro ekunze, kekutanga, nyika dzeG20 dzakazvipira kuti dzisvike pachinangwa chekuve nekudziya kuri pasi. 1.5 madhigirii nekukasira kuita uye zvisungo zvepakati, "akadaro pamusangano wake wekupedzisira wevatori venhau. Kuwedzera kuti "mari yeruzhinji" yekuvakwa kwenzvimbo itsva dzemarasha "haizopfuuri kupera kwegore rino."
Nyaya ye zero emissions uye kushorwa kwakaratidzwa neChina neRussia, iyo isina kugamuchira nguva yekupedzisira ye2050, iri kuronga chinangwa kumakore gumi anotevera (2060). Musoro mukuru wemibvunzo yakabvunzwa nevatapi venhau kune Prime Minister Draghi uyo, zvisinei, anonzi anogutsikana, kunyange kuzviratidza kushamiswa nekuzaruka, (maererano naye), kunoratidzwa nehurumende mbiri.
“Kubva kuChina kusvika mazuva mashoma apfuura ndaitarisira kuomesa musoro; kwaiva nechishuvo chokunzwisisa mutauro wakananga zvikuru kunguva yemberi kupfuura nguva yakapfuura,” akawedzera kudaro Draghi, “Russia neChina dzakagamuchira ufakazi hwesayenzi hwe1.5 C°, iyo inobatanidza kurega zvimwe zvinhu zvikuru, [uye] hazvisi nyore kuzvipira kuita. chengeta. China inogadzira 50% yesimbi yenyika; zvirimwa zvizhinji zvinomhanya pamarasha; inguva yakaoma.” Uye pamuganho kusvika muna 2050, akawedzera kuti: "Tichienzanisa nemamiriro ekutanga, kuzvipira kwakawedzera kusvika 2050 mumutauro wekuburitswa kwenhau. Haina chokwadi, asi yakanga isipo kare. Pave paine shanduko ine mutauro une tariro kunyange kudivi renyika idzo kusvika zvino dzakanga dzaramba.”
Uye chibvumirano ichi chaigoneka, akatsanangura, chete nekuda kwenzira yakavakirwa pamultilateralism yaisanganisira masimba ese aripo: "PaG20 takaona nyika dzakaswedera kune nzvimbo dzevamwe nemutauro wakakodzera," akadaro.
“Ndinotenda Ambassador Mattiolo nevese Sherpa nebasa ravakaita. Chimwe chinhu chachinja paG20, chinova chekuti pasina kubatana, hatifambire mberi, uye kubatana kwakanakisa kwatinoziva ndeye multilateralism, ine mitemo yakanyorwa kare uye yakativimbisa kubudirira.
Mitemo ichashandurwa inofanira kuchinjwa pamwe chete. "
Uye anopa muenzaniso: "Kekutanga mugwaro reG20, mundima 30, tinowana mutsara unotaura nezvemaitiro ekugadzirisa mitengo yemarasha. Tinodaidza zvikamu zvakasiyana-siyana zveG20 kuti zviite zvinoenderana nezvavakasungirwa kuti zvizadzise zvinangwa izvi uye musanganiswa wakakodzera wehupfumi hune kuburitswa kwegasi regreenhouse nekuisa chinangwa chenyika dzine urombo. Kubatana kwakakonzera shanduko ndeyekuziva kuti chero kufambira mberi kwakaenzaniswa nekare pamwe chete nechivimbiso chekubatsira kubva kunyika dzakapfuma kune musoro. Ndiyo imwe yenyaya idzo China neRussia dzakasarudza kuchinja chinzvimbo chadzo. "
Draghi, uyo aida zvikuru musangano uyu, akayeukawo kuzvipira kwakaitwa kunyika dzine urombo zvikuru pasi rose: "Takaisa hwaro hwekugadzirisa kwakaenzana uye takawana nzira itsva dzekutsigira nyika pasi rose," akagumisa PM Draghi.
Biden: "Tichasvika pamhedzisiro inobatika, nekuda kweItari."
Musangano wevatungamiriri veG20 muRome wakaburitsa "zvinobatika" mhedzisiro pamamiriro ekunze, COVID-19 denda, uye hupfumi. Mutungamiri weUnited States, VaJoe Biden, vakataura izvi mumusangano wekupedzisira wevatori venhau, vasati vaenda kuGlasgow, kuCOP26, uye vakatenda zvakanyanya Italy neMutungamiriri wenyika, Mario Draghi ne "basa guru rakaitwa."
"Ndinotenda kuti tafambira mberi zvinobatika, zvakare nekuda kwekutsunga kwaunzwa neUnited States patafura" yenhaurirano. Musangano uyu "wakaratidza simba reAmerica payakabatana nekushanda nevatinodyidzana navo pazvinhu izvi." Biden akabva ataura kuti "hapana chinogona kutsiva nhaurirano dzakatarisana nekudyidzana kwepasirese."
Tiririyoni imwe miti yakadyarwa panosvika 2030
"Nekuona kukurumidza kurwisa kuparara kwevhu uye kugadzira makabhoni matsva anonyura, tinogovana chinangwa chikuru chekudyara pamwe chete miti 1 trillion, tichitarisa kune yakanyanya kuparara ecosystem pasirese." Izvi zvinogona kuverengwa mukuzivisa kwekupedzisira kwemusangano weG20 muRoma.
“Tinokurudzira dzimwe nyika kuti dzibatane neG20 kuti zvizadzise chinangwa chepasi rose ichi panosvika gore ra2030, kusanganisira kuburikidza nemapurojekiti emamiriro ekunze, nekubatanidzwa kwemasangano akazvimirira pamwe neveruzhinji,” inoverenga kudaro.
Johnson: "Kana Glasgow ikakundikana, zvese zvinotadza."
"Ndichabuda pachena, kana Glasgow ikakundikana, zvese zvinotadza." Mutungamiri weBritain, Boris Johnson, akataura izvi achitaura nezveCOP26 pamusangano wevatori venhau pakupera kweG20 muRome. "Takafambira mberi mune iyi G20, asi tichine nzira yekuenda," akawedzera, "Hatina kumbotaura kwenguva," akataura nezve Draghi-Erdogan thaw mukukwazisana kwekutanga paG20.
Mhinduro kubva kuHuffington Post
Kubva kuG20 muRome, takatarisira mhinduro dzakawanda uye zviito zvekongiri pamberi pekurwisa dambudziko remamiriro ekunze. Takaodzwa mwoyo neClimate Pact yakasainwa nhasi. Ichi chibvumirano chinogadzirisa izvo zvakatowanikwa kare, pasina kupa zvisungo zvekongiri pamusoro pemari yemamiriro ekunze, kutanga neItaly iyo isina kuisa patafura mupiro wayo wakanaka - inokwana 3 bhiriyoni euros pagore - kune yakazara 100 bhiriyoni yemadhora yakavimbiswa makore matanhatu apfuura muParis sechisungo chemubatanidzwa chenyika dzakabudirira kubatsira varombo zvakanyanya mukuita kwemamiriro ekunze. Muchidimbu, kuNuvola Rome, iyo G6 yakawana mvura inopisa mukurwisa dambudziko remamiriro ekunze.
Ikozvino tariro ndeyekuti muGlasgow, uko COP26 inovhurwa nhasi, vakuru vepasi vachakwanisa kuwana chibvumirano chekusvika pachibvumirano chitsva chemamiriro ekunze chinokwanisa kuchengetedza chinangwa che1.5 ° C chiri chipenyu cheChibvumirano cheParis chakasainwa muna 2015, asi. zvakare kukurumidza kuchinjika kukuchinja kwemamiriro ekunze, kubata nekurasikirwa uye kukuvadzwa kwenharaunda dzakanyanya kukanganiswa nekukurumidzira, asiwo uye pamusoro pezvese mari yakakwana yekuitwa kwenyika dzine urombo uye kupedza Rulebook, kureva, kuita mitemo yeChibvumirano, pakupedzisira ita kuti ishande.
Chibvumirano chekutengeserana uye Afghanistan.
Turkey yakaunza biography sechipo kusaina rugare.